Imbobo yothando yasemakhaya eduze kwaseKirkby Lonsdale - I-Airbnb
Imbobo yothando yasemakhaya eduze kwaseKirkby Lonsdale
196 okushiwo abanye
Carnforth, Cumbria, i-United Kingdom
I-indlwana ephelele ibungazwe ngu-Derek
Ikotishi lizinze eCumbria futhi lihlotshiswe ngothando futhi lafakwa ngezinga eliphezulu, linikeza izivakashi ikhaya elithokomele elivela ekhaya.
Indawo yokulala yonke isezingeni elilodwa ibekwe phansi kwengadi yayo enkulu nengasese. Indawo yokuhlala evulekile inekhishi elihlome kahle, itafula lokudlela eli rustic, usofa omkhulu wokuphumula kanye ne-smart tv engu-52”.
Ekamelweni kukhona umbhede ophindwe kabili owubukhazikhazi namashidi welineni acwebile kanye nenani elakhelwe endaweni yokugcina. Igumbi lokugezela le-en-suite lineshawa enkulu yemvula ehamba ngezinyawo kanye nesitimela sethawula elishisayo. Yilapho futhi ozothola khona umshini wokuwasha nokomisa kukhishelwe kude ukuze ungabonwa ekhabetheni labo elakhelwe inhloso.
Ikotishi lihlomula ngokuxhumeka kwe-inthanethi kwe-B4RN super fast fiber kanye nokufudumeza kwangaphansi kulo lonke.
4.99 · 196 okushiwo abanye
I-Hamlet yaseLupton itholakala eCumbria ngaphandle nje kwenhlonhlo engu-36 ye-M6; Ukuhamba nje imizuzu emi-5 ukusuka edolobheni lemakethe elaziwayo laseKirkby Lonsdale elinemigwaqo yalo emincane, izitolo ze-boutique, ababhaki bezandla kanye nokukhethwa kwamabha nezindawo zokudlela.
I-Lupton ilele ebangeni elilula le-Lake District kanye ne-Yorkshire Dales National Park's, i-Morcambe Bay kanye ne-Forest of Bowland. Amadolobhana namadolobhana anjengeKendal, Windermere, Hawes, Malham kanye neLancaster wonke alele ngaphansi kwemizuzu engama-45.
Mina nomndeni wami sihlala esizeni futhi sikhona ukuze sisize izivakashi njengoba kudingeka, sisiza ukuqinisekisa ukuthi unokuhlala okujabulisayo nokungajahi.
Hlola ezinye izinketho ezise- Carnforth namaphethelo